Ciyaarta finalka Netherlands iyo Spain - BBC News Somali
Ciyaarta finalka Netherlands iyo Spain
11 Luulyo 2010
Image caption Amin arts
Koobkii kubadda cagta adduunka ee markii ugu horaysay ka dhaca qaaradda Africa, ayaa maanta lagu soo gabagabaynayaa kooxaha Spain iyo Netherland oo ku kulmaya ciyaarta final-ka oo ka dhacaysa dalka Koonfur Africa.
Labada koox, midkoodna waligii ma hanan koobka adduunka.
Ammaanka, ayaa aad loo adkeeyay agagaarka garoonka kubadda cagta soccer city oo ku yaalla Soweto, halkaas oo la rajaynayo in ay ka dhacdo sidoo kale xaflad qurux badan oo lagu soo gabagabeeyo ciyaaraha.
Madaxwaynayaal ayaa ka mid noqon doona wajiyada dadka caanka ah ee munaasabadda lagu casuumay, iyadoo munaasabadda la filayo in ay shaashadaha caalamka ka daawacaan boqolaal million oo dadwaynaha adduunka ah.
Image caption Amiin Arts
Kooxda Netherlands laba jeer oo hore ayay timid final-ka ciyaaraha adduunka, balse Spain waa markii ugu horaysay final-ka koobka adduunka.
Spain, waxay haysataa koobka qaaradda Europe. Ololaha ay u soo gashay imaanshaha final-ka ciyaaraha adduunka goolal badan kuma soo badin.
Taageerayaasha labada koox ayaa mid walba filayaa in kooxdoodu hanato koobka adduunka.
Si kastoo ay ahaataba, kala bax waa garoonka iyo koox walba wixii ay la soo shir tagto. Spain iyo Netherlands tii noqon doonta tan qaadata koobka adduunka caawa ayaa la kala ogaan doonaa.